Amaphilisi Awama ARVs Adlulisa Isikhathi Sokusebenza Khona Kulabawadinga Ngabomvu
Lanxa kulabantu phose abedlula ingxenye yesigidi abafuna amaphilisi okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lengculaza emzimbeni, kulembiko ethi kulenkulungwane lenkulugnwane zalamaphilisi agcinwe aze edlula isikhathi sawo sokusebenza.
Okhokhela ikhansili ye National Aids Council uDokotela Tapiwa Magure uthi lesi sehlakalo siyamangalisa ngoba abantu bebanengi abaphila legcikwane abesengozini yokulahlekelwa yimpilo ngenxa yokuswelakala kwamaphilisi la wona egciniwe ezibhedlela.
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wogatsha lwezempilakahle, uMnu. Henry Madzorera yehlule kodwa ubikwa etshele intathelizindaba ngempelaSonto ukuthi amaphilisi ayake ethathe isikhathi eside ngoba kungela zisebenzi zempilakahle ezeneleyo zokuwahlola lokuwaba.
UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophila legcikwane njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye Zimbabwe National Network of People Living with AIDS uMnu. Obert Banda ochasisa imbono yakhe ngaloludaba.